17 Desambra 2020 - FJKM Québec - Canada
17 Desambra 2020
16 décembre 2020 by
« Tompoko , mba ta-hahita an’i Jesoa izahay » (and21b)
JAONA 12 : 20-36
12:20 Ary nisy Grika sasany tamin’izay niakatra hivavaka tamin’ny andro firavoravoana,
12:21 ary izy ireo nankany amin’i Filipo avy any Betsaida any Galilia, dia nangataka taminy ka nanao hoe: Tompoko, mba te hahita an’i Jesosy izahay.
12:22 Dia lasa i Filipo nilaza tamin’i Andrea; ary i Andrea sy i Filipo lasa nilaza tamin’i Jesosy.
12:23 Ary i Jesosy namaly azy hoe: Tonga ny fotoana hankalazana ny Zanak’olona.
12:24 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy latsaka ao amin’ny tany ny voam-bary ka maty, dia mitoetra foana izy; fa raha maty kosa izy, dia hahavokatra be.
12:25 Izay tia ny ainy no mahavery izany; fa izay mankahala ny ainy amin’izao fiainana izao no hiaro izany ho amin’ny fiainana mandrakizay.
12:26 Raha misy olona manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka Ahy, ary izay itoerako, dia ao koa no hitoeran’ny mpanompoko; raha misy olona manompo Ahy, dia hankalaza azy ny Ray.
12:27 Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko; ary ahoana no holazaiko: Ray o, vonjeo Aho ho afaka amin’ity ora ity? Nefa izao no niaviako ho amin’ity ora ity;
12:28 Ray o, mankalaza ny anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Efa nankalaza azy Aho, ary hankalaza azy indray.
12:29 Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe: Kotrokorana izany. Hoy ny sasany: Anjely no niteny taminy.
12:30 Jesosy namaly ka nanao hoe: Tsy noho Izaho no nahatongavan’izany feo izany, fa noho ianareo.
12:31 Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao; ankehitriny ny andrianan’izao tontolo izao no horoahina.
12:32 Ary Izaho, raha asandratra hiala amin’ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanatona Ahy.
12:33 Izany no nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany.
12:34 Dia namaly Azy ny vahoaka ka nanao hoe: Efa renay tamin’ny lalana fa i Kristy haharitra mandrakizay; koa ahoana no ilazanao hoe: Tsy maintsy hasandratra ny Zanak’olona? Iza moa izany Zanak’olona izany?
12:35 Dia hoy i Jesosy taminy: Mbola kely ihany no hitoeran’ny mazava aminareo. Mandehana, raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina; fa izay mandeha amin’ny maizina dia tsy mahalala izay alehany.
12:36 Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minoa ny mazava, mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilaza izany i Jesosy, dia niala Izy ka niery azy.
Izany no fanirian’ny Grika sasany izay niakatra hivavaka tamin’ny andro firavoravoana . Inona no nataon’i Filipo teo anatrehan’izany ?
1-Nentina teo amin’ny mpiara-miasa ny faniriany (and 22a)
« Dia lasa Filipo nilaza tamin’i Andrea … » (and22) . Tsarovy fa maro ny olona no mangetaheta te-hahita an’i Jesoa sy te-handre ny Teniny kanefa , kanefa tsy afaka noho ny olana maro samihafa. Anjarantsika Fiangonana ny mamantatra sy mandray ny hetahetan’ny olona eny anivon’ny fiaraha-monina , ny mifampita vaovao mikasika ny asa fitoriana ny Filazantsara any amin’ireo toerana izay mbola tsy nandrenesana na nitoriana izany . Tsara homarihana eto fa tsy nanilika azy noho ny maha-hafa firenena azy ireo i Filipo , fa nihaino azy kosa . Aoka mba tsy hasiana fanavakavahana saranga na fiaviana , na firazanana ny asa fitoriana ny Filazantsara . Manana zo hahita an’i Jesoa ny olona rehetra .
2-Nolazain’izy ireo tamin’i Jesoa izany (and 22b)
Tsy nijanona hatreo ny raharaha . « Ary Andrea sy Filipo lasa nilaza tamin’i Jesoa » . Tsy ampy ho famahana olana ny fahalalana ny hetaheta sy ny fanirian’ny olona , raha tsy mivavaka ho azy isika . Miezaka hamaha olana amin’ny alalan’ izay fihevitra sy fisainana maha-olona isika , kanefa tsy mahomby, satria Jesoa no tadiaviny fa tsy isika . Manana anjara toerana lehibe eo amin’ny fampihaonana ny olona amin’i Jesoa Mesia ny mpianatra . Isika Fiangonana no manohy izany asa izany . Isika dia natao ho fiasana eo am-pelatanan’Andriamanitra , ka hiara-mivavaka , hanao izay hihaonana sy hahitan’ny olona an’Ilay Mesia . Fianarana ho antsika izao nasehon’i Filipo sy Andrea izao , miara-misaina sy miara-miasa izy ireo mba hahitan’ny olona an’i Jesoa Ilay Mesia .
Ahoana no hamantarana fa mitady an’i Jesoa ny olona iray ?